Nisesy niarahaba sy niresaka tamin’ny filoham-pirenena teo aloha daholo na ireo manampahefana sy olon-tsotra na ireo masoivoho vahiny voaasa nanatrika ny lanonana. Hita ho nilamina sy tao anaty tsikitsiky ny fifampiresahana ary ny mpanao gazety ihany koa avy hatrany tonga dia nifandrombaka nampiresaka an’i Marc Ravalomanana. Nisongadina teny Ivandry omaly fa tena mbola manana ny maha izy azy eto Madagasikara izy, tsy azo ihodivirana, tsy azo dinganina. Nandritra ny tafa nifanaovany tamin’ny mpanao gazety no nilazany fa tsy manana eritreritra hanakorontana fanjakana ny TIM. Tsy tahaka ireny no atao raha hanongam-panjakana fa fomba hafa, hoy izy. Nomarihany mazava tsara anefa fa tsy maintsy hankalaza ny faha-15 taonany eto Antananarivo Renivohitra ny TIM saingy mbola hifampiresahana ny fanatanterahana azy. Ankoatra, izay mampalahelo sady mahamenatra, hoy i Dadavalo fa tena ratsy endrika eo imason’ny Tahirimbola iraisam-pirenena (FMI) i Madagasikara, araka ny resaka nifanaovany tamin’ny solontenan’ny FMI eto Madagasikara. Lany andro izahay mandinika ny momba an’i Madagasikara, hoy ny FMI araka ny fitantaran’i Marc Ravalomanana omaly. Maro ny zavatra tsy mety eto ka mila fanitsiana hoy, izy. Anisan’ireo tazana niresaka nitokana taminy teny Ivandry moa omaly ny masoivoho Frantsay, Amerikanina, Japoney, teo ihany koa Atoa Pierrot Rajaonarivelo (loholona), Rachidy Mohammed (HVM).